Ukuphrinta (Isikrini & Pad) - I-Xiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co, Ltd.
Ukuphrinta kwesikrini kuyindlela yokuphrinta lapho kusetshenziselwa khona i-mesh ukudlulisa uyink ku-substrate, ngaphandle kwezindawo ezenziwe ukuthi zifakwe kuyinki ngepensela evimbayo. I-blade noma i-squeegee idluliswa esikrinini ukugcwalisa i-mesh evulekile nge-uyinki, bese kuthi isitebhisi esibuyele emuva sibange isikrini sithinte isitho esingezansi komugqa lapho sithintana khona. Lokhu kubangela ukuthi uyinki umanzise i-substrate futhi ukhishwe kumakhomputha we-mesh njengoba isikrini siphuma emuva ngemuva kokuba ibala lidlulile. Umbala owodwa uphrinta ngesikhathi, ngakho-ke izikrini eziningana zingasetshenziselwa ukukhiqiza isithombe noma ukwakheka okuxubile.
Mayelana nokuphrinta kweSilkscreen
Ukuphrinta kweSilkscreen kuyindlela ekhethiwe yokukhiqiza izinganekwane eziqinile ezisezingeni eliphakeme nezinhlamvu ku-silicone irobhothi yekhiphedi.Ngenxa yento enjoloba enjoloba, Izinkomba zePantone zisetshenziselwa ukufeza ukucaciswa kombala ngqo, futhi izinkinobho zingaphrintwa ngombala owodwa noma eziningi colours.I-Standard set noma izinhlamvu ezikhethekile nezinganekwane zingafakwa ekwakhiweni kwekhiphedi, futhi ukuphrinta kwe-reverse / okuphambene nakho inketho.
Mayelana nokuPrinta kukaPad
Ngokuphrinta kwe-pad, ingaphezulu lepuleti lokuphrinta liqukethe isithombe esenziwe kabusha esizoprintwa. I-squeegee icindezela uyinki esithombeni esenziwe kabusha bese isusa uyinki owedlulele. Ngasikhathi sinye, iphakethe le-silicone-rubber lisuka kokuqukethwe liyophrinthelwa epanini lokuphrinta. Iphansi yehliswa ngaphezulu kwepuleti lokuphrinta, ngakho-ke kuthola isithombe ukuthi siphrintwe. Lokhu kusho ukuthi ukuphrinta kwe-pad kuy inqubo engaqondile. Iphakethe liyobe lisuka libuyele emuva libuyele kulokho okusetshenziselwa ukuphrinta.
Ukuphrinta ukubekezelela kuma-keytops ngu +/- 0.3mm
Lapho uphrinta indawo ephelele ye-keytop vumela u-0.5mm emaphethelweni wokuphrinta ukubekezelela
imibala edingekayo ukuze iphrintwe
isikhundla (s) sokuphrinta
Ukuphrinta kwePad inqubo yokuphrinta engadlulisa isithombe se-2-D entweni eyi-3-D. Lokhu kwenziwa ngokusebenzisa inqubo yokuphrinta ye-offset engaqondile efaka isithombe esidluliswa sisuka kwi-cliché nge-silicone pad singene kwisigatshana esingaphansi.